အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ - MYSTERY ZILLION
November 2009 edited December 2009 in Internet & Email
ကျွန်တော်ကအင်တာနက်ကိုဆို်င်တွေမှာလိက်သုံးတတ်တဲ့ကောင်တစ်ကောင်ပါ:D။ အကောင့်ပာက်မခံရအောင်လို့တော့ registry editor မှာ၀င်၀င်ပြီးနာမည်ဖျက်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်တစ်ခြားဆိုင်တွေမှာ Run မရှိတတ်ပါဘူး ။ အဲလိုဆိုင်တွေမှာသုံးပြီးပြန်လာရင်ပာက်ခံရမှာကိုရေရေလည်လည် စိုးရိမ်ပါတယ်။ ကူညီကြပါခင်ဗျာ။
မြတ်သန့်ဇော် wrote: »
တစ်မျိုးတော့ထင်နဲ ့အကို ့အကောင့်ကို hack ဖို ့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ဘူး ...
တကယ်လုပ်တတ်တဲ့လူကိုလည်း ကျွန်တော်တော့ တွေ ့ဖူးဘူး..မရှိဘူးလို ့ဆိုလိုတာလည်း ဟုတ်ဖူး
ရှိချင်ရှိမယ် မရှိတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ် google ကို ကျော်ပြီးတော့ လုပ်ဖို ့ဆိုတာက လိုပါတယ်
နောက်ပြီးတော့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေက registry တော့ ပိတ်မှာပဲ အဲ့လိုပိတ်တယ်ဆိုတာလည်း...
ကလိမှာကြောက်လို့အကောင့်ခိုးဖို ့မဖြစ်နိုင်ဘူး စီပွားရေးလုပ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ ့
ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို ့ဆိုတာ အရမ်းကလေးဆန်နေတယ် ကွန်မကောင်း လူ သိတ်မလာလို ့စိတ်ညစ်နေတဲ့
အထဲမှာ အဲ့တာလုပ်ဖို ့က google ကို hack ဖို ့ထက် တောင် ပိုတောင် မဖြစ်နိုင်သေးတယ်:68:
I think, better Use portable Gtalk.
But not sure Save or not.:O
Hacking technology is .............:106::106::106:
Hacking Is Not Crime..!
သိပ်လည်းစိတ်မပူပါနဲ ့အကိုတကယ် hacker ကြီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို ့ရဲ ့အကောင့်တွေကိုမခိုးလောက်ပါဘူး ခိုးစရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး အဲဒါနဲ့လက်သရမ်းတက်တဲ့ script kiddy တွေရဲ ့ရန်ကတော့ ကြောက်ဖို ့လိုမယ်နော် အဲဒါကထက်အရေးကြီးတာက အဲဒီဆိုင်မှာ keylogger ရှိမရှိပါပဲ ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့
အဲဒီ registry value သိ်ရုံနဲ့ဟတ်လို ့မရဘူးလို ့ထင်ပါတယ် keylogger ကတော့သိတဲ့အတိုင်းဗျို ့
အစ်ကို bluerays ရေ အဲဒီလိုညိုးတော့မပြောပါနဲ့ဗျာ။
သိပ်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ တကယ့်ဟတ်ကာကြီးတွေကတော့ ဟတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဟတ်ရလောက်အောင်လည်း အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်တွေမရှိပါဘူး။
အရမ်းစိတ်ပူတက်လို့ ကီးလော့ဂါ ရန်ကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ အလွယ်လေးပါဗျာ။
ဥပမာ ဗျာ password က mthantzaw ထားပါတော့ဗျာ အရင်ဆုံး mhanzaw လို့ ရိုက်ဗျာ ပြီးရင် မောစ့်ကိုသုံးပြီး ဗျာ m ရဲ့ရှေ့ကို ရွှေ့ပြီး t ထဲ့ဗျာ မောစ့်နဲ့နော် နောက်ပြီး n ရဲ့အရှေ့ကို ရွှေ့ဗျာ မမြင်ရရင်ရေ ရွှေ့ပေါ့ အဲလိုတော့လုပ်ရမယ် မောစ်နဲ့နော် t ထဲ့ အဲဒါဆို ကီးလော့ဂါက ဒီလိုမှတ်ထားလိမ့်မယ် mhanzawtt ဆိုပြီးတော့လေ။
အကို နှလုံးရောဂါ ရနေမှာစိုးလို့ ရေးလိုက်ပါတယ်....အချိန်ကည ၁၂း၄၄ ရှိနေပါပြီ....သာမာန် level HACKER ရန်က ကာကွယ်ချင်တယ်ဆို USB Stick ထဲမှာ notepad file ဆောက်ပြီး password ကိုcopy paste လုပ်သုံးပေါ့.....ဒါမှမဟုတ် Gtalk ကပေးတဲ့ Service ကို သုံးမယ်ဆိုရင် Gtalk login box ကို right click လုပ်ရင် Right to Left Leading Order ,Insert unicode control letter စတဲ့ fuction ၁ခုခု သုံးပါ......
aungpyaesone wrote: »
ဥပမာ ဗျာ password က mthantzaw ထားပါတော့ဗျာ အရင်ဆုံး mhanzaw လို့ ရိုက်ဗျာ ပြီးရင် မောစ့်ကိုသုံးပြီး ဗျာ m ရဲ့ရှေ့ကို ရွှေ့ပြီး t ထဲ့ဗျာ မောစ့်နဲ့နော် နောက်ပြီး n ရဲ့အရှေ့ကို ရွှေ့ဗျာ မမြင်ရရင်ရေ ရွှေ့ပေါ့ အဲလိုတော့လုပ်ရမယ် မောစ်နဲ့နော် t ထဲ့ အဲဒါဆို ကီးလော့ဂါက ဒီလိုမှတ်ထားလိမ့်မယ် mhanzawtt ဆိုပြီးတော့လေ။ :d
အစ်ကိုရေ အဲ့ဒါကအရင် ကီးလောဂျာတွေအတွက်တော့မှန်လိမ့်မယ်ဗျ။ အခုပေါ်တဲ့ ကီးလောဂျာတွေက ဘယ်လိုလျှောက်ရိုက်ရိုက််မရဘူး ပက်စေ၀ါ့တန်းအမှားလည်းပေါ်တယ် အမှန်လည်းပေါ်တာဘဲဗျ။ကိုယ်တွေ့ဘဲ။
blueray ပြောတာဟုတ်တယ်ဗျ hacking တိုင်းက ပြစ်မှုမဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ hacking ကိုတောင်မှ နိင်ငံတော်အဆင့် လုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုနေကြတာပဲ။ System တခုကိုအမှန်တကယ် hacker တွေမှအကာအကွယ်ပေးနိုင်တာပါ။ နိုင်ငံလုံခြုံရေးအဆင့်မှာလဲအဲဒီလိုပါပဲ။
Hacker တွေချိုတော့ ပြောအားချိတာပေါ့............ အဲ့လို မေးအကောင့်လေးသိရင် ပတ်ပေါ့ ယူလို့ ရလားဟင်...... Password ယူတာ တစ်ခုထဲကို Hack တာလို့ ခေါ်တာလား....... Host Server (or) Database ထဲကို၀င်ပြီး Data တွေ ဖျက်သွားတာကျတော့ ဘယ်လိုခေါ်သလဲဟင်......
ကီလော်ကာကိုကာကွယ်လို ့၇ ပါတယ့် softwareလေးပါ
အိပ်ပျော်နေသူ wrote: »
ဟုတ်တယ်ဗျ advanced keylogger တွေဆို အဲ.အတိုင်းပဲ ။ အဲလိုရိုက်ရုံနဲ.တော. မရဘူး ။
computer ဆိုက်ဘာက ကိုဟက်ကို ပြောနေတယ်ထင်ပ ..........
i want to test run keyloogger........
malware con wrote: »